Yakatumirwa ne Tranquillus | 22 Sea, 2021 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Pakati pezviri mukati uye chimiro, vanhu vazhinji vanopokana kuti vafarire imwe kana imwe. Muchokwadi, iwe hauna iyo yakasarudzika kana iwe uchida kuramba uri nyanzvi. Kunyangwe zvirimo zvinopupurira kugona kwako, zvakanyanya fomu rinozivisa nezve kukomba kwako uye kuremekedza kwauinako kune vaverengi vako. Nekudaro, iwe unofanirwa kufunga nezve yakawanda paramende iyo inobvumidza iwe kuti uburitse yakanakisa zvinyorwa uye izvo zvinoita kuti iwe ude kuverenga.
Yekutanga kuona kuonga
Iyo nyanzvi yekuverenga, uye kunyangwe amateur, akaumbwa kuti aone fomu kutanga asati aenda pasi. Nekudaro, iye ane ichi chirevo chekushandisa kosi yekuona kubva kumusoro kusvika pasi uye kubva kuruboshwe kurudyi. Mumasekonzi mashoma, muverengi ane kukoshesa kwemhando yechinyorwa. Kuongorora uku hakuzombo shandurwe kunyangwe hunhu hweshure huripo. Izvi zvinotsanangura kukosha kwemaitiro, kushandiswa kwemamwe mazwi, kuiswa kwemifananidzo, nezvimwe. Izvi zvinotsanangurawo chinzvimbo chemusoro kumusoro uye kuenderana kwemisoro mikuru yese kuruboshwe kuruboshwe rwepeji.
Iko kushandiswa kwemafuta uye mafuta
Iko kushandiswa kwemafuta nemafuta kunotevera pfungwa yesimba. Chokwadi, iro ziso rinokwezva nechinhu chero chine simba rakakura kupfuura huremu, ndosaka tichiisa hombe kana kushinga zvinhu izvo zvatinoda kutarisisa. Muchirevo chechinyorwa, iyi ndiyo nyaya yemusoro wenyaya nemisoro mikuru iri murudzi rukuru uye masumo nemhedziso zviri zvakashinga. Pane hunyengeri hunoshandiswa nevazhinji nyanzvi mukugadziriswa kweshoko, uye ndiko kushandisa imwe font inonyanyo taurwa kumazita nemisoro midiki.
Varungu vanoreva matypographic block ayo anopa ruzivo rwekusiyana kwavo musimba. Aya ndiwo mitsetse, mitsetse yemapeji, nzvimbo. Izvi ndizvo zvinobvumidza gwaro kufema uye rinotamba pamaonero emuverengi gwaro. Saka zvinoratidzwa kusvetuka mutsetse nekuisa musoro usingawedzere saizi yefonti zvakanyanya pachinzvimbo chekuita kuwedzera uku asi uchisiya uchimanikidzwa pakati pezvinyorwa.
Iko kushandiswa kwetopographic hierarchies
Chinyorwa chako hachisi chebasa rehunyanzvi saka haugone kushandisa zvisizvo nzvimbo yepamusoro. Zvingaite sebhaisikopo ine akawanda akawandisa mhedzisiro. Pakupedzisira hapana anomutora zvakakomba. Nekudaro, iwe unofanirwa kusarudza muyero uye dzivisa kushandisa akawandisa akawanda masitaera. Iyo yakanaka ingave imwechete kana maviri masitaera.
Uye zvakare, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kuiswa kwemifananidzo kunogona kuve kwakakura kuwedzerwa kukosha kwechinyorwa kana zvaitwa nemazvo. Zvikasadaro, iyo inopesana mhedzisiro inowanikwa. Ichi chikonzero nei uchifanira kuongorora kukosha kwechifananidzo uye kushandisa mafomati emavara kana zvichibvira.
Chekupedzisira, mirau yese iyi inofanirwa kuve yakasanganiswa nenzira ine hungwaru uye yakaenzana nekuti kana iwe uchida kuisa chinoonekwa pazvinhu zvakawanda panguva imwe chete zvese zvinova zvisina kujairika. Saka unomanikidzwa kuita sarudzo.
Master zvemukati uye fomu mune ako zvinyorwa Kurume 22nd, 2021Tranquillus
pashureKudzingwa uye mamiriro ezvinhu anoshungurudza: mushandi wako anogona here kukumbira kukuvara kunyangwe mhosva yacho ichiruramiswa?
zvinoteveraTeleworking: chirongwa chekuita chevatungamiriri kusimbisa kushanda kwechikumbiro chayo
Nzira yekunyora sei zvakajeka uye zvemabhizimisi emaimeri?